ဇွဲကပင်တောင် ကေဘယ်ရထား စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီး - Yangon Media Group
ဇွဲကပင်တောင် ကေဘယ်ရထား စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီး
ဘားအံ၊ ဧပြီ ၃ဝ
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့နယ်ရှိ ဇွဲကပင် တောင် ကေဘယ်ရထားစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်မှု ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီး နေပြီး တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း အတွက် လိုအပ်နေသောပစ္စည်းများ ဧပြီ ၂၉ ရက်ကထပ်မံရောက် ရှိလာကြောင်းသိရသည်။ ဇွဲကပင်တောင် ကေဘယ် ရထားစီမံကိန်း၌ အသုံးပြုရန် ပစ္စည်းများ ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်သို့ သယ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြု ချက်ဖြင့် တပ်မတော်ရဟတ်ယာဉ် ဖြင့် လေးခေါက်တိတိ ကူညီပို့ဆောင် ပေးခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့ ချစ်လင်းမြိုင် တိုယိုတာကုမ္ပဏီက ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ပြည်ပပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ သြစတြီးယားနိုင်ငံ ပညာရှင်တွေနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ပြီး အကြမ်းဖျင်းအနေနဲ့တော့ ကေဘယ် ရထားရိုးရိုးအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာသိန်း ၇ဝ လောက်ခန့် မှန်းထားတယ်။ ကုန်ကျမှုအနေနဲ့ အဆောက်အအုံပိုင်းတွေရော အား လုံးအပြီးအစီးဆိုရင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သိန်း ၁၂ဝ လောက်ကုန် မှာပါ။ အခုသဘောတူညီချက်အရ စီမံကိန်းကာလကို တစ်နှစ်ခြောက်လ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် ဒီထက် စောပြီး ပြီးစီးဖို့ရှိပါတယ်” ဟု ချစ်လင်းမြိုင်တိုယိုတာကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ကရင်ပြည်နယ်၊ နယ်ခြား စောင့်တပ်များ အထွေထွေအတွင်း ရေမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး စောချစ်သူက ပြောသည်။
ဇွဲကပင် ကေဘယ်ရထား စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင် ရေးအတွက် ချစ်လင်းမြိုင်တိုယိုတာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် ဇွဲကပင် မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်းကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်က ကော်မတီနာယက ဆရာတော်များ၊ ပြည်နယ်လွှတ် တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများရှေ့မှောက်၌ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းအား ဇွဲကပင် မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ် ဘားအံ မြို့နယ် တော်ပုံကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဇွဲကပင်တောင် OSS-66၊ ဇွဲကပင် ဆရာတော်ပိုင် ဥယျာဉ်ခြံမြေ ၁၂ ဒသမ ၇၂ ဧကနှင့် ကြိုးပြင်ကာ ကွယ်တောမြေဧရိယာ (ဝ ဒသမ ၇ဝ) ဧကတို့၌ ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဇွဲကပင်တောင်သည် သာမန်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သည့် လူငယ်များ ခြေကျင်တက်မည်ဆိုပါက တစ်နာရီခွဲခန့် အချိန်ကြာမြင့်ပြီး အသက်ကြီးသူများနှင့် ကျန်းမာရေး အားနည်းသူများဆိုပါက နှစ်နာရီ ကျော်ခန့် တက်ရောက်ရကြောင်း သိရသည်။
ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် တူရကီတွင် ချက်ဘောလုံးသမားသေဆုံး
မိုးရွာသွန်းပြီး လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် မြဝတီ-ကော့ကရိတ် အာရှအမြန်လမ်း၌ သစ်ပင်လဲကျ၊ တစ်??
‘မန္တလေးဖျော်ဖြေပွဲမှာ ပရိသတ်တွေ ကျေနပ် အားရမှုရှိအောင် ကြိုးစားသွားမယ်’ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြိုင်ကြီးငူ ဆရာတော်၏ ရုပ်ကလာပ်တော်ကို လာရောက် ဖူးမြော??
မင်းကွန်း၌ နယ်ကျွံ ဝင်လာသည့် သမင်အထီး တစ်ကောင်ကို လူဝိုင်းလိုက်သဖြင့် မြစ်ထဲထွက်ပြေးရာမှ ?
ဥပဒေများ အချိန်မီ ပြဋ္ဌာန်းခြင်းဖြင့် ချို့ယွင်း အားနည်းချက်များကို ပြုပြင်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကယ်လ်စီယမ် စားသုံးမှု နည်းပါးလာ